Fiaviana – Trinitera Malagasy
Étiquette : Fiaviana
Alahady faharoa amin’ny Fiavian’ny Tompo Taona D
Matokia, mifalia fa mpamonjy Andriamanitra. Baroka 5, 1-9 Salamo 125 Filipiana 1, 4-6.8-11 Md Lioka 3,1-6 Amin’ity alahady faharoan’ny Fiaviana ity dia antsoina hanandrana ny hafaliana entin’ilay tonga hamonjy antsika isika. Hafaliana maimaim-poana saingy tsy afaka miaraka amin’izay mety ho…
2 Samoela 7, 1-5.8b-11.16/ Sal 88b/ Md Lioka 1, 67-79 Hohiraiko mandrakizay ny hatsaram-pon’ny Tompo, ambarako amin’ny firenena rehetra ny fahamarinanao. Isaorana Izy fa mamangy sy manavotra ny olona. Izany no ataony dia ny mba hanompoantsika azy tsy amin-tahotra, am-pahamasinana…
Malakia 3, 1-4. 23.24/ Salamo 24/ Md Lioka 1, 57-66 Mahalala antsika tsirairay avy Andriamanitra ary mahafantatra ny antsimpirihim-piainantsika (salamo 138), ary nofidiany isika tsirairay avy ho fitaovana hitaran’ny famonjeny ho an’ny olombelona rehetra. Tsy afaka ny tsy haniry izany…
Alahady faha-efatra Fiaviana Taona A
“Aza matahotra ny hampakatra an’i Maria vadinao”.
I Sam 1, 24-28 / I Sam 2, 1-8 / Md Lioka 1, 46-56 Ny vakiteny voalohany dia mampianatra antsika fa fanomezan’Andriamanitra izay rehetra eo am-pelantanantsika, eny fa na dia ny taranaka aza, ka fahamarinana ny mahafoy azy manontolo ho an’ny…
Tononkira 2, 8-14/ Sal 32 / Md Lioka 1, 39-45 Injay ny feon’ny malalako, indry tamy izy miantsambotsambotra eny an-tendrombohitra, mitsambikina amin’ny havoana. Ilay notiavina no tsindrian-daona efa tsy maharay lamba miandry ny fihaonana amin’ilay tia azy. Izany no anehoan’ny…
Izaia 7, 10-14/ sal 23 / Md Lioka 1, 26-38 Rehefa nandray enim-bolana i Joany dia nirahin’Andriamanitra ny Anjely ho any Galilea, ho any Nazareta. Fotoana mampahatsiaro ny andro faha-enina naharian’Andriamanitra ny olombelona, mampahatsiaro ny ora faha-enina nipetrahan’i Jesoa reraka…
O ry Tomponay ô! Ilay tsinjon’i Moizy tao anatin’ny kirihitra sy nanolotra azy koa ireo didinao folo: avia miondrika, mba arovy amin’ny sandrinao mahery izahay.
ZOMA II FIAVIANA
Trinitaires Madagascar Comments 0 Comment
Izaia 48, 17-19 / Sal 1 / Md Matio 11, 16-19 Modely ho antsika i Jesoa, ilay Mpanavotra. Ny hevitry ny hoe Tompo, mpanavotra (גָּאַל ga’al) izay miverina matetika ao amin’ny Bokin’Izaia (omaly koa tao amin’ny toko 41) dia entina…